Wararka - Wadarta qoraalada wadada gaaska
1. Ku saabsan noocyada dareerayaasha
Isticmaalka dareeraha si aad u isticmaasho hawo cadaadis leh, isticmaalka cabitaannada kale ee munaasabadda waa inay xaqiijiso shirkadda.
2. Xaaladda biyaha isku halleeya
Hawada la cadaadiyey ee biyo macaan ayaa sabab u noqon doonta cillad bixinta qaybaha pneumatic. Shaandhada ka hor, qalajiyaha hawada, dabinnada isku soo ururaya waa in la rakibaa.
3. Maaraynta maareynta bullaacadaha
Mar haddii la iloobay isku-darka si uu u soo saaro shaandhada hawada, isku-darka ayaa ka soo bixi doona labada dhinac, taasoo sababi doonta cillad-darrada qaybaha hawo-mareenka. Maaraynta dheecaanka kondensiga leh waxay leedahay munaasabado adag, waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho shaandhada leh dheecaan otomaatig ah.
4. Ku saabsan noocyada hawada
Hawada la cadaadiyo oo ay ku jiraan kiimikooyin, saliid macmal ah oo ay kujiraan dareerayaal dabiici ah, cusbo, gaasaska wax dila, iwm, ayaa noqon doona sababta burburka iyo ficilka xun, ee aan loo adeegsan
5. Miiraha hawada waa in la rakibaa
U dhow dhinaca kore ee waalka, miiraha waa in lagu rakibaa saxsanaanta 5µ m ka dib miiraha hawada.
6. Ka dib markaad dejiso qaboojiyaha, qalajiyaha hawada iyo aruuriyaha biyaha ururiya, iwm.
Hawo la cadaadiyey oo ay ku jirto qadar fara badan oo biyo cufan ah, waxay u horseedi doontaa waalka iyo qaybaha kale ee pneumatic ee ficilka xun, markaa nidaamka isha gaaska waa in la dejiyaa ka dib qaboojiyaha, qalajiyaha hawada iyo aruuriyaha biyaha ururiya, iwm.
7. Toner iyo marar badan oo ka mid ah dhinaca kore ee waalka, waa inuu dejiyaa kala sooca ceeryaanta saliida
Marka toner-ka uu soo saaray kombaresarada hawada, kuna xiran waalka, waalka ayaa sababi doona ficil aan wanaagsaneyn.
Shuruudo faahfaahsan oo ku saabsan tayada hawada la cadaadiyey, fiiri shirkadda "nidaamka sifaynta nadiifinta hawada".
8. Dheecaan biyo qulqulaya
Biyaha isku dhafan ee ku jira shaandhada hawada waa in si joogto ah loo siidaayaa.
9. Saliid ahaan
Elasting solenoid valve daboolida, hal mar saliida, saliidu waa inay noqotaa mid joogto ah.
Marawaxadaha No. 1 (laguma daro) VG32 ISO waa in la adeegsadaa. Marka lagu daro saliida saliidda, waxay sababi doontaa cilladda waalka, iwm.
10. Tuurista tuubooyinka
Tuubbada tuubada ka hor inta aan la afuufin ama la dhaqo goynta dhamaadka biibiile netka, saliida goynta ama boodhka iwm.
11. Habka fuuli ee cajalad wax lagu xiro
Dhuumaha iyo isku-xidhka tuubada waa munaasabad isku xidhka dunta, ha u oggolaan dunta tuubbada budada ah ee wanaagsan iyo suunka qashinka lagu qaso tuubo gudaha ah. Marka cajaladda wax lagu dhejiyo la isticmaalo, dhammaadka hore ee dunta xarigga ah waa in dhinac la dhigaa iyadoo la raacayo 1 xarig oo dun ah oo aan lagu duudduubayn cajaladda wax lagu dhejiyo.
12. Ha u isticmaalin gaasaska wax guma, kiimikooyinka, biyaha, biyaha, deegaanka uumiga biyaha ama meelaha leh walxaha kor ku xusan.
13. Ku ilaali dhismaha u dhigma IP65 iyo IP67 (oo ku saleysan IEC60529) badeecada, (boodhka iyo biyaha) boodhka iyo biyaha waa la ilaalin karaa. Laakiin looma isticmaali karo biyaha, waa in fiiro gaar ah loo yeesho.
14. U dhiganta badeecada IP65 iyo IP67, rakibaadda waa inay ahaato mid ku habboon in lala kulmo qeexitaanadooda, waxaa lagama maarmaan ah in la akhriyo qoraallada shay kasta.
15. Gaaska ololi kara, jawiga gaaska qarxa, ha isticmaalin, si looga fogaado shilalka dabka iyo qarax. Badeecadani ma laha qaab dhismeedka qarxinta ka hortagga.
16. Ha ku isticmaalin meesha gariirka iyo gariirka.
17. Goobta qorraxdu ka muuqato, waa inay ku darsataa daboolka difaaca, qorraxda daboola.
18. Waxaa jira meelo ku wareegsan isha kuleylka, shucaaca kuleylku waa inuu joogsadaa.
19. Meesha ay ku jiraan dhimbilo shidaal ama alxamid iyo meelo kale oo ku lifaaqan, waa in la qaadaa talaabooyin ku habboon oo ilaalin ah.
20. Qalabka Solenoid ee lagu rakibay kabadhka kontoroolka, waqti dheer oo ku saabsan awoodda munaasabadda, waa inuu qaadaa tillaabooyin kuleyl ah si loo hubiyo in qalabka kalluumeysiga ee kuleylka heerkulka la oggol yahay.
21 Dayactirka iyo kormeerka waa in lagu sameeyaa iyadoo la raacayo nidaamka hagista tilmaamaha.
Marka la isticmaalo, waxay u geysan doontaa dhaawac, dhaawac, ama waxyeelo shaqaalaha.
22. Qaybaha ka soo dejinta iyo hawo is ciriiriyey qiiqa
Xaqiijinta wadista shayga ayaa loo sameeyay si looga hortago qashin tuurista iyo ka hortagga qashin daadinta, jarista gaaska iyo korontada, nidaamka pneumatic haraaga gudaha ee hawada la isku cadaadiyay iyadoo la adeegsanayo habka sii deynta cadaadiska haraaga ah ayaa faaruqiyey, dejiso qaybaha. Intaas waxaa sii dheer, seddex bartanka shaabadda ama nooca waalka, waalka iyo silsilada udhaxeysa hawo habeysan oo harsan ayaa sidoo kale la faaruqinayaa.
Ka dib beddelka ama dib u rakibidda qaybaha, kan ugu horreeya ee xaqiijiya kiciyaha pneumatic iyo wixii la mid ah ayaa la qabtay si looga hortago in si dhakhso ah loo tuuro qashinka, ka dibna la xaqiijiyo hawlgalka caadiga ah ee qaybaha.
23. Isticmaalka soo noqnoqoshada oo hooseeya
Si looga hortago dhaqdhaqaaqa waalka waa xun yahay, waalka waa inuu ahaadaa 30 maalmood gudahood si ficil isbeddel loogu sameeyo hal mar, fadlan fiiro gaar ah u yeelo tayada hawo bixinta.
24. Hawlgalka gacanta
Hawlgalka gacanta, qalabka waa in lagu xiraa ficil, ka dibna la xaqiijiyaa hawlgalka nabdoon.